SmartDocs: Jikwaa Microsoft Word Repository | Martech Zone
Imirikiti ndị ahịa B2B na-ahụ onwe ha ka ha na-edepụta atụmatụ (RFPs) na ihe ahịa na Okwu Microsoft ugboro ugboro. Ozugbo azụmahịa gị bidoro ito, ị chọpụta na ị nwere akwụkwọ ebe niile. Anyị na-eji Google Docs maka akwụkwọ ndị ahịa anyị na mmekorita. Anyị na-eji Igbe ntinye maka nchekwa anyị.
Ebe ọ bụ na imirikiti ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-eji Okwu Microsoft to write out their documentation… e nweghị ụzọ dị mfe iji leverage na akwụkwọ. Iri Atọ Software bụ a mpaghara ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya gosiri na ha Microsoft dabeere na teknụzụ dabeere repository usoro na Anya - Nzukọ kwa ọnwa na-egosipụta nnukwu mmalite na mpaghara ahụ.
N'iji ọrụ Microsoft Sharepoint, ThirtySix Software mepụtara SmartDocs iji zaa otu nsogbu - mana nnukwu - nsogbu. Nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ akwụkwọ enweghị ụzọ ịhazi, ịchọta, na iwekota akwụkwọ ahụ na-akpaghị aka maka ojiji dị iche iche. Ugbu a ha na SmartDocs na-eme ya. SmartDocs bụ njikwa ihe na ọdịnaya na-emezi ihe na Okwu Microsoft.
Isi ihe ngosi SmartDocs:
Nwepu ego ederela ma kwado ọdịnaya ka imepụta ọhụụ Okwu Microsoft akwụkwọ.
Mfe jigharịa ederede, tebụl, eserese, na eserese ngwa ngwa Okwu Microsoft akwụkwọ.
Jiri ederede ederede na-emepụta ọtụtụ ọdịiche nke mmepụta site na otu akwụkwọ Microsoft Word.
Kpochapu ọdịnaya na-adịkwaghị ma ihe eji adịchaghị mma na ọkwa eji agbanwe agbanwe na mmelite akpaka.
Na-arụ ọrụ site na ihe nketa Okwu Microsoft akwụkwọ. Enweghị mgbanwe ntụgharị achọrọ.
Na-ejikọta na usoro njikwa akwụkwọ ọ bụla.
Gaa n'ihu na-echekwa dọkụmentị gị n'otu ebe ị na-eji taa.
Fọdụ ndị na-ege ntị jụrụ banyere atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ ịrụ ọrụ ma tinye ọnụ na nyiwe ụlọ ọrụ ndị ọzọ. TwentySix Software zara na enweghị atụmatụ dị otú ahụ - edere usoro ahụ na C #, nke ejiri ya na Sharepoint, wee rụọ ọrụ na Microsoft Word. Ekwenyere m na TwentySix na nke a bụ atụmatụ magburu onwe ya - ahịa nke Microsoft buru ibu ma ụgwọ na ọghọm metụtara ijikọ ọhụụ ha ga-abụ oke.
Gị Iri Atọ Software maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ngosipụta nke ngwanrọ ha.
Tags: b2b ọgụgụ isi nke ndị ahịab2b afọ ojuju ndị ahịafoneelu na-akọJesse Nọrọndu ndulvvnzuzu
Njikọ nri akpaka WordPress